Mogadishu Journal » Dowladda oo beenisay in weerar lala damacsan yahay Garoonka Aadan Cadde
Mjournal :-Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in aanay wax amni darro iyo cabsi ka jirin garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaddib markii ay AMISOM ay joojiyeen dhaq dhaqaaqii xeyndaabka garoonka.
Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo dhulka Maxamed C/llaahi Salaad Oomaar ayaa sheegay in xaalada garoonka uu yahay mid caadi ah, isla markaana howlaha ay u socdaan sidii loogu tala galay
“Xaaladda amni ee garoonka waa wanaagsan tahay, wax cabsi ah ma jirto, shaqada sideeda u socotaa, garoonka habeen iyo maalin ayuu shaqeeyaa, Sabti kasta shir looga hadlayo amniga garoonka ayaa qabanaa”ayuu yiri Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Dhulka.
Saraakiisha Amniga garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa sheegay in wax saameyn ah aanu ku yeelan xaalada ka jirta Xalane oo talis u ah AMISOM, isla markaana ay xarumo ku leeyihiin Safaaradaha Ajnabiga.
Taliska AMISOM ayaa 9-kii bishan soo saaray amar lagu joojinayo dhaq dhaqaaqa Xerada Xalane iyo nawaaxiga Garoonka, si ay u sameeyaan xaqiijin amni iyo nadiifin, kaddib markii ay soo baxeen suurta galnimada weeraro laga fuliyo gudaha Xerada Xalane.
Todobaadkii hore Mareykanka ayaa muwaadiniintiisa ku amray inay isaga baxaan garoonka diyaaradaha, gaar ahaan xerada Xalane, xaalad amni darro awgeed oo jirta iyo khatar.